မန္တလေးဆရာတော်ကြီး သရက်ခုံကျေးရွာ ဘာသာဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ - Mandalay Catholic Archdiocese
မန္တလေးဆရာတော်ကြီး သရက်ခုံကျေးရွာ ဘာသာဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ
posted 25 Jul 2015, 19:11 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE [ updated 25 Jul 2015, 19:12 ]
၁၃.၇.၂၀၁၅ ရက်နေ့နံနက်တွင် မန္တလေး ကက်သလစ်သာသနာမှ ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ်မန်ထန်းသည် တောင်တွင်းကြီးမြို့စိန်အန်ထော်နီဘုရားကျောင်းရှိ ဘောင်ဒါဆောင်မှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို တွေ့ဆုံကာ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုနောက်ကျောင်းသားများကို အားပေးစကားပြောကြားကာ နေ့လည်စာသုံးဆောင်ပြီး သရက်ခုံကျေးရွာသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါသည်။ တောင်တွင်းကြီးဇုံ သရက်ခုံကျေးရွာ စိန်ဂျိုးဇက်ဘုရားကျောင်းတွင် မန္တလေးကက်သလစ်သာသနာမှ ဆရာတော်ကြီး နီကောလားစ်မန်ထန်း၊ တောင်တွင်းကြီးဇုံမှုး ဘုန်းဘုန်းဂြိုဟ်တု၊ မိတ္ထီလာဇုံမှုး ဘုန်းဘုန်းမောင်ဆန်း၊ Fr.Soe Tun, Fr.Tun Tun Naing, Fr.Win Nyo, Fr.Tun Theik, Fr.Myo Zaw Win , Fr. Mon Pi ,Fr. Zaw Win ,Fr. Pyone Cho တို့ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်ကြီးသည် ညနေပိုင်းတွင် သရက်ခုံကျေးရွာ စိန်ဂျိုးဇက်ဘုရားကျောင်းတွင် ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဟောပြောမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးးက အခုလိုဘာသာတူများနှင့် တွေ့ဆုံရတာ ဝမ်းသာကြောင်း၊ ဒီကို လာတဲ့အချိန်ဟာ မိုးတွင်း လမ်းကြမ်းတယ် လမ်းမကောင်းဘူးလို့ပြောကြပေမယ့်လည်း ဘာသာတူများကို တွေ့ချင်သည့် စိတ်ဖြင့် တောင်တွင်းကြီးကနေ ဆက်သွားဘူတာထိကား၊ ဆက်သွားဘူတာကနေ ကုက္ကိုန်းဘူတာထိ ထော်ထီ၊ ကုက္ကိုကုန်းကနေ သရက်ခုံကျေးရွာထိ ကျွဲလှည်းစီးပြီး လာရတဲ့အခါမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ဒေသခံတွေရဲ့သွားလာရေး အခက်အခဲတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း၊ အခုလို လာရောက်တွေ့ဆုံနိုင်တာဟာလည်း ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုရားသခင်ဟာ လူသားအားလုံးကို ချစ်တော်မူကြောင်း၊ အဓိကလာရင်း အကြောင်းအရင်းမှာ သရက်ခုံသာသနာဆိုတာ သရက်ခုံ ကျေးရွာမှာရှိကြတဲ့ ဘာသာတူတွေ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အတူတကွ မစ္ဆားပူဇော်ခြင်းဟာ သာသနာပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သရက်ခုံသာသနာ တိုးတက်ဖို့ အဓိက တာဝန်၇ှိသူတွေက မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ ဒေသခံဘာသာတူတွေသာဖြစ်ကြောင်း၊ တိုးတက်ချုင်တယ်၊ မတိုးတက်ချင်ဘူးဆိုတာက ဘာသာတူတွေရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မိခင်၊ ဖခင်၊ လူငယ်တွေ ကလေးတွေအားလုံး စုပေါင်းပြီး သရက်ခုံသာသနာတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ကြဖို့ ပြောကြားချင်ကြောင်း၊ ဆရာတော်အနေနှင့် ပုခုံးလွဲပြောင်းပေးတာ မဟုတ်ပေမဲ့ မိသားစုက အခြေခံတဲ့ သာသနာဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း မြွတ်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး မိတ္ထီလာဇုံမှုး ဘုန်းဘုန်းမောင်ဆန်းမှလည်း မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းတဲ့ ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ခဲ့ပါသည်။တစ်ဦးဆီ၏ ယုံကြည်ခြင်း ရှင်သန်ဖို့အရေးကြီးကြောင်း၊ ခက်ရာခက်စစ်လမ်းကြောင်းကို လာတာဟာ ဆရာတော်အနေနဲ့ ဘာသာတူတွေကို အသိမနောက်ကျစေလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကျမ်းစားမှာပါသည့်အတိုင်း ငါ့ကိုသခင် သခင်ဟုခေါ်သော သူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ မရောက်နိုင်ကြောင်း၊ အကျင့် မကျင့်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်းဟာ အကျိုးမရှိကြောင်း၊ လက်တွေ့ အကျင့်မပါသောကြောင့် အသေဖြစ်ကြောင်း၊ ဟောပြောခြင်းထက် ကျင့်ကြံခြင်းက ပို ထိရောက်ကြောင်း၊ လူသားအားလုံး ကယ်တင်ခြင်း ချမ်းသာရရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ ကြိုးစားရန်လိုကြောင်း၊ ဘာသာတူတွေက တက်ညီလက်ညီ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ လုပ်ဆောင်ကြရန် လိုကြောင်း၊တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ချစ်ခြင်း မေတ္တာထားခြင်းအားဖြင့် သခင် ခရစ်တော် နေထိုင်ကျင့်ကြံသည့် အတိုင်း နေထိုင်သွားကြမှသာလျှင် ကိုယ့်ရဲ့ ကက်သလစ်သာသနာအသင်းတော်ဟာ တည်မြဲမည်ဟု ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
အဲဒီနောက် တောင်တွင်းကြီးဇုံမှုး ဘုန်းဘုန်း ဂြိုဟ်တုသည် ဘာသာတူများဘုရား ဆုတောင်းရုံဖြင့် ဘုရား ကျေးဇူးတော်ခံစားရကြောင်း၊ဘာသာတူတွေနဲု့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ အပြန်အလှန် ဆုတောင်းပေးကြပါက သာသနာဟာ ဒီထက် ပိုမို တိုးတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ဘာသာတရားဆိုိတာ အားမှလုပ်ဆောင်တဲ့အရာ မဟုတ်ကြောင်း၊ လမ်းသွားရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုခြင်းဖြင့်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ၁၄.၇.၂၀၁၅ နံနက် (၆း၃၀)တွင် မစ္ဆားတရား ပူဇော်ခဲ့ကြပါသည်။ မစ္ဆားတရားအပြီးတွင် စုပေါင်းကာ မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးပြီးနောက် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး သဲဖြူကျေးရွာသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါသည်။